Shenzhen Dengfeng Power Supply Co., Ltd. Vita ny Jiangxi Plant - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
an-trano > vaovaon'ny orinasa > Shenzhen Dengfeng Power Supply Co., Ltd. Jiangxi Plant dia vita
Shenzhen Dengfeng Power Supply Co., Ltd. Jiangxi Plant dia vita
Vitan'i Shenzhen Dengfeng Power Supply Co., Ltd. Jiangxi Plant. Ilay orinasa vaovao dia nomena anarana hoe Dengfeng Technology (Jiangxi) Co., Ltd.
Jiangxi Dengfeng dia miorina ao amin'ny County Quannan, Sina Shina. Manakaiky ny Faritanin'i Guangdong izy io. Mivoatra ny fifamoivoizana, ary maharitra adiny 4 vao mandeha fiara avy any Quannan mankany Shenzhen. Sahabo ho 300km ny halavirana. Amin'ny ho avy dia hisy lalamby haingam-pandeha haingam-pandeha mampitohy azy any Shenzhen. Noho izany, Jiangxi Dengfeng ho avy dia fototra famokarana tena lehibe ho an'ny orinasa tampon'ny fihaonambe.
Ilay orinasa vaovao dia manana trano indostrialy mahaleo tena miaraka amin'ny velarany 10.000 metatra toradroa mahery. Izy io dia misy atrikasa famokarana vonjy taitra sy famokarana herinaratra maika, atrikasa fametahana metaly marindrano, atrikasa famokarana masinina fanamafisam-peo, atrikasa fitifirana elektrostika mandeha ho azy, ary famokarana elektronika avo lenta.
Amin'ny ho avy, ny toha-pamokarana dia hamokatra vokatra mihoatra ny 200 tapitrisa yuan isan-taona ho an'i Dengfeng. Mandritra izany fotoana izany dia hanisy asa 100 farafahakeliny ho an'ny faritra eo an-toerana izy.
:Inona ny fahasamihafana misy amin'ny bateria Lithium-ion sy ny bateria Nickel-cadmium?